फित्कौली हास्यव्यङ्ग्य सङ्ग्रह - ओली उडाउने अभियान
ओली उडाउने अभियान लक्ष्मण गाम्नागे
बस्न पाएँ भन्दैमा थ्याच्च नबस्नू, बोल्न पाएँ भन्दैमा प्याच्च नबोल्नू भन्ने उखान हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नसुनेका होलान् र ! तर, यिनी के भा हुन् ? बस्न त यिनी बस्दै बस्दैनन् तर बोल्नचाहिँ बोलिरहन्छन्, प्याच्च प्याच्च । चीनबाट पहाडै पहाडको बाटो हुँदै चुच्चे रेल बोलाएर पशुपति परिक्रमा गराउँदै पोखरा घुमाएर लुम्बिनी पठाइदिन्छु भन्छन् । खानी खन्छु, देशभित्रै पेट्रोल उत्पादन गर्छु, ग्यास निकाल्छु भन्छन् । हिन्द महासागरमा नेपाली जहाज कुदाउँछु भन्छन् । मुख छ भन्दैमा यसरी मनलागी बोल्न पाइन्छ ? यस्ता कुरा गर्न अरू नेताहरूलाई नआउने हो र !
तिनै कुरालाई अलिक कलात्मक पाराले, नबुझिने भाषामा घुमाएर भनेको भए हुँदैनथ्यो ? प्रयास गर्यो भने नेपालमा चीन वा भारतबाट रेल ल्याउन सकिन्छ भनेको भए कति मीठो सुनिन्थ्यो । नेपालका विभिन्न ठाउँमा तेलका खानीहरू भएको अनुमान भएकाले त्यसको खोजी गरेर उत्खननका लागि प्रयास गरिनेछ भनेको भए तिनका पिताजीको के जान्थ्यो ? केही वर्षमा, छिट्टै अथवा आगामी दिनमा यसो यसो गरेर मुलुकलाई विकासको गतिमा अगाडि बढाइनेछ भनेको भए पनि त सहन सकिन्थ्यो । ठाडो भाखामा तीन महिनामै, ६ महिनामै, एक वर्षभित्रमा, दुई वर्षभित्रमा, यो ल्याउँछु, त्यो गर्छु, यो बनाउँछु, त्यो खन्छु भनेर भकाभक कामै थालिहाल्ने कुरा गरेपछि यिनका पुतला नपोलेर भो ? हामीलाई उखानटुक्कामा लटपट्याएर साँच्चिकै कामै गर्न थाले भने अग्रज प्रधानमन्त्रीहरूको इतिहास के हुन्छ ? भविष्यमा बन्ने प्रधानमन्त्रीहरूको नाम के हुन्छ ? देश बनाउने भन्दैमा सहकर्मीहरूको इतिहास र भविष्यलाई नै संकटमा पार्ने संदिग्ध गतिविधि गर्न थालेपछि समारोह नै आयोजना गरेर एउटा विद्यार्थी संगठनले यिनलाई उडाउन ठूलो प्रयास गर्यो । यिनलाई अझै उडाउनुपर्छ ।
कांग्रेसका युवा जमातले बालुवाटारमै समारोह आयोजना गरेर प्रधानमन्त्रीलाई खुइल्याउन गरेको यत्न साह्रै प्रशंसनीय छ तर यसमा उनीहरूले अलि भाँती पुर्याएनन् । यस्तो अपरिपक्व विरोधले ओलीलाई लडाउन सकिँदैन । युवाहरूले ओलीलाई उडाउन बनाएको राष्ट्रिय झन्डा र ओलीको आकर्षक तस्बिर अंकित स्वचालित नमुना पानीजहाजले बालुवाटार अगाडि धेरै फन्को लगायो । रिमोट कन्ट्रोलबाटै नियन्त्रित पानी जहाजले बालुवाटार अगाडि यसरी फन्को लगाएपछि ओली उल्टै कति रमाए होलान् ! उनलाई मानवरहित जहाज नै हिन्द महासागरमा चलाउन थप प्रेरणा मिलेन त यसबाट ? त्यो नमुना जहाज चलाउन खोज्दा टसको मस नहुनुपथ्र्यो । घचेटेर चलाउन खोज्दा पनि जहाज नचटपटाएको भए पो ओलीलाई उडाउने कार्यक्रम सार्थक हुन्थ्यो । विद्यार्थीहरूले त उल्टो हौसला पो दिए ओलीलाई ।
विद्यार्थीहरूले नारा लगाउन पनि जानेनन् । केपी ओली चाहिँदैन त भने तर उनीहरूले नेपालमा रेल चाहिँदैन, जहाज चलाउन पाइँदैन, पेट्रोलको खोजी कार्य बन्द गर, ग्यास पत्ता नलागोस्, खानी खन्न दिँदैनौँ, भनेनन् । छिमेकीसँग झुक्नै पर्छ, टाउको ठड्याउने कोसिस मुर्दावाद, देश बनाउन पाइँदैन, स्वदेशी चामल खाइँदैन, ओलीका सपना खारेज गर इत्यादि पनि भनेनन् । त्यस्ता नारा लगाएको भए पो ओली मात्र होइन, उनका सपना पनि उड्थे । प्रधानमन्त्रीबाट उडे पनि उनका सपना उडेनन् भने हामीले उनलाई उडाएको के अर्थ ? त्यसैले आइन्दा अलि भाँती पुर्याएर ओलीलाई उडाउने अभियान अघि बढोस् ।
नेपाल, जेष्ठ २०, २०७३